Mey 25, 2018 Admin
Mike Novogratz: US Gov fanadihadiana an Bitcoin dia zavatra tsara
Miliaridera mpampiasa vola Mike Novogratz nilaza fa tsy gaga ny fanambarana sy mandray ny fanadihadiana, ny fihetseham-po nanako ny Cameron Winklevoss, filohan'ny crypto fifanakalozana Gemini. Wall Street lehibe indrindra Bitcoin omby nidera ny hetsika ho toy ny fanombohan'ny fanaraha-maso ilaina fitsipika.
"Weeding ny ratsy mpilalao dia zavatra tsara, Tsy misy zavatra ratsy ho an'ny fahasalamana ny tsena,"Novogratz, izay mametraka cryptocurrency mpivarotra banky Galaxy Digital LP, Hoy ny tafatafa. "Betsaka ny fifanakalozana manana ireo boky inflated isa mba hamoronana fahatsapana fientanentanana sasany manodidina ny vola madinika," hoy izy, fitanisàna ny traikefa miezaka ny varotra.
"Tsy mandray izay fanadihadiana izay manompo hamahana fitsipika mifototra amin'ny tsena sy nahakivy ratsy mpilalao,"Winklevoss, filohan'ny Gemini fifanakalozana, hoy ny fanambaran'i.
Nanofa Kraken Bush fitantanana mpampanoa lalàna toy ny torohevitra ankapobeny
San Francisco-monina cryptocurrency fifanakalozana Kraken efa nanamby ny teo aloha mpampanoa lalàna federaly tendren'ny Filoha George W. Bush mba ho ny torohevitra ankapobeny.
Business Insider mitatitra fa ny fifanakalozana, fahavalo lehibe indrindra eto an-tany miaraka amin'ny boky isan'andro ny marina eo ambany $350 tapitrisa, efa nanamby Mary Beth Buchanan, ny vehivavy voalohany sy ny zandriny indrindra-mandrakizay olona nanendry antsika ho amin'ny Western Attorney District de Pennsylvania.
20% ny andrim-panjakana ara-bola mihevitra crypto barotra tolotra in 2018 araka ny fanadihadiana Reuters
Ontario ara vaovao ara-bola mafy Thomson Reuters dia namoaka fanadihadiana vokatra mampiseho nitombo liana tamin'ny cryptocurrency tsena.
Thomson Reuters fanadihadiana 400+ mpanjifa ary nahita fa ny iray-ampahadimin'ny ireo mikasa ny hanolotra cryptocurrency varotra tolotra ao amin'ny manaraka 12 volana, manan-danja noho ny fitomboan'ny ny isan'ny fangatahana avy mpivarotra, izay dia "fiovana lehibe."
Ahoana no manova ny ICO Market in 2018?
2017 nahita explosi ...
Efa ho ny antsasaky ny 2...
Jona 10, 2018 amin'ny 1:25 PM
Misaotra! Good post!